Dating iyo Xiriirka Advice - Waxaad isticmaali kartaa sharciga ah ee soo jiidashada Helo Love True?
Last updated: Jan. 04 2018 | 3 min akhri
Sidaas waxa Law of Attraksjon? Si fudud waa Law Universal oo oranaysa waxaan soo jiidan doonaa nolosheena waxyaalaha aynu diiradda aannu ogaanno on, haddii ay tahay mid togan ama taban. Haddii aad tahay ogayn ama aan ah, kasta oo moodayay in aad adigu leedahay, dareen kasta oo aad ka dareento, wax kasta oo aad maqlo iyo akhriso, waxay saamaysaa xaqiiqada.
Sidaas waxa aanu u baahan in la sameeyo guur iyo xiriirka?
By si dhab ah loo fahmi lahaa waxa aad rabto in aad ka xiriir iyo codsanaya qaar Law aad u aasaasiga ah ee mabaadiida Attraksjon, waxaad xaqiijin doonaa in aad hesho waxa aad si dhab ah dooni. Waxaa muhiim ah in la fahmo dhab ahaan waxa u nisbayn jirka, dabeecadaha, qiyamka, aaminsan, danaha iyo waa muhiim in aad si aad xoogga u saarto waxa aad rabto in xiriirka halkii waxa aadan rabin in aad.
Xusuusnow, waxaad heli doontaa waxa aad diiradda saaraan.
Marar badan, dadka ka bixi doonaan hal xiriirka ku guuldareystay inuu mid kale oo aan sheegin fikiri doono ha ahaadee sababta ama sida xidhiidhka ay sii guul darreysatay. Waxaa ka sii wanaagsan, ay in ka badan sax ah oo aad ku danbeyso in xiriir kale oo xumaato la mid ah, sababaha aad u daran weli ka soo horjeeda.
“Haddii aad tahay sida aan ahaa, aad qabto wax fikrad ah kama waxa aad dhabtii doonaysid
ka xiriirkiina soo socda ñ oo kaliya waa in gebi ahaanba ka duwan
mid ka mid ah la soo dhaafay in guuldareystay si baas!”
Sida runta ah waxaan ogaaday waxa Ma aanan rabin ñ ugu yaraan xiriirka in kaliya ku dhamaaday. Ma jeclaan lahayd ma in ay ka weyn haddii aan la qaatay lahaa waqti aad u fikirto dhammaan xiriirka guuldareystay iyo marka la isku daro xunuun oo dhan gaadhay hal fikrad cad ka mid ah wixii aan sameeyey iyo in uusan rabin in xiriir? I badbaadi lahaa naftayda dhowr bed of pendulum ah.
Sidee baan u helo’ xidhiidhka ugu fiican ii?
Waxaan doonayaa inaan aad u tuso jidka dhab fudud oo degdeg u soo jiitaan qofka saxda ah ee aad raadinayso – Taariikhda aad riyo!
Ka soo warqad qori wax walba oo aad rabto in aad xiriir kaamil ah. Waa maxay isagu ama iyadu ay jeceshahay? Sidee ay u eegto, urta, hadalka? Waa maxay noocyada kala duwan ee wax wada samayn doonaa? Sideed u aragtaa in marka aad ku wareegsan? Run ahaantii galay tan iyo waqti u qaadato ay si faahfaahsan u kasta oo aad qorto. Waxa ay noqon doontaa si fiican u qalantaa in dhamaadka.
Dadka intooda badan marnaba tallaabadaas qaadaan of qoraya waxa ay doonayaan iyo weli waa talaabo kaliya ee ugu muhiimsan ee raadinta lamaanahaaga ay rabeen.
“Ma ogtahay in ay si fudud u soo qortid waxa aad rabto, aad u kordhisid fursadaha aad u heli lahayd adigoo aad 80%!”
Ka fikir ku saabsan in daqiiqad ah…
Naftaada ha ka shakiyin. U qaado in aad tahay kaamil ah si kasta oo ay jiraan taago kulahayn habka aad u qaadan wixii aad rabto. Ma aha lacag, ama looks, ama waqti, ama wax kale.
“ImagineÖ Waxaad heli kartaa wax kasta oo aad doonayso inaad!”
Marka aad layligan ku dhameysatay, waxaad noqon doontaa si fiican ka hor kulanka. Qaado inta aad u baahan tahay… Tani waxay fure u tahay in aad guul kama dambaysta ah!
Noqo aad u cad in aad maskaxdaada ku saabsan waxa aad rabtid. Haddii kale, Caalamka, waxay yeelan doonaan fikrad ah kama aad dhabtii doonaysid ñ iyo in waxa ay idin siin doonto. (Just qoraal degdeg ah, marka waxaan dhihi 'Aduunkan', Waxaan ula jeedaa Ilaah, Buddha, Hooyo Earth, ama wax kasta oo dheer oo aad u isticmaali aad awood sare oo caalami ah.)
Wareersan? Haddaba aniga ila joog hereÖ Bal qiyaas socday makhaayad iyo amro hamburger ah. Kabalyeeri u laabanayaa in aad si. Ka hor aad hamburger yimaado, isbedesho aad si. Hadda kuu sheegi mudalabka in aad dhabtii doonaysid besteeki. Kabalyeeri u laabanayaa in aad si. Ka hor aad besteeki yimaado, kuu sheegi mudalabka in aad maskaxdaada mar bedelay oo jeclaan lahaa in salad a. Hadda markan, mudalabyada ugu kuu sheegi lahaa in la sameeyo salad naftaada. Caalamka, waxba ma qaban doonaa, laakiin waxaad ka arki kartaa sida ay u adag tahay Caalamka, si ay kuu siiyaan waxa aad rabto in aad marka ma oga in aad?
Ñ ​​OK dhameysatay?
Haddii aadan sidaas samayn ñ dib tag oo saas yeel. Waxaan u sheegay in arrintaani ay noqon doonto mid fudud, laakiin ay weli si samayn yar ee shaqada.
Hadda oo aad tahay qof aad u cad oo ku saabsan waxa run ahaantii aad dooni in la Wadaage, qaado gabal in warqad, waxay iilayaan Laabtooda oo aad la qaado ugu yaraan asbuucii. Markasta ee aad jeebkaaga, ee boorsada jeebka ama boorsada, ama in aad u. Wax macno ah ma meesha aad ku rid, ilaa iyo inta aad u sii kula ugu yaraan asbuucii. Mar kasta oo aad ku xusuusatid in aad leedahay intan yar ee waraaqaha aad la, xusuusan dareen ah waxa la jeclaan doonaa in aad lammaanahaaga noqon. Waxaa dareemi!
Waxaa jira hal talaabo dheeraad ah oo aad muhiim u ah. Toddobaadka dhexdiisa, hubi in aad dhegaysatid mindhicirka, ama codka gudaha. Haddii ay kuu sheegeysaa in ay joojiyaan at the lagu nadiifiyo qalalan on Tuesday marka aad booqato on Thursday, tag on Tuesday! Waxaa laga yaabaa inaad aad la kulanto saaxiibkiisa Naf halka aad taagan line. Dhibic waxa ay tahay in aad kaalinta amarkaaga la Caalamka, hadda waxaad u baahan tahay inaad lacag bixisid si aad Aayaadka in lagu jidkiinna iyo ACT ku Dirray Cadaab dareenka!